TCDD Taşımacılık Kadrolu Memur Alımı Yapacak! | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ၀ န်ထမ်းများအားအမြဲတမ်းစုဆောင်းနိုင်သည်။
28 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က
TCDD Taşımacılık AŞ Kadrolu 52 Memur Alımı Yapacak!: TCDD Taşımacılık AŞ için kadrolu lisans mezunu memur alımları kapsamında 52 kadro ayrıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından “2019/2 KPSS tercih kılavuzunu” yayımlamasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına lise, lisans ve önlisans mezunları için tüm kadrolar belli oldu.
KPSS 2019 /2ဗဟိုအစိုးရမီးရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီအားခွဲတမ်းခွဲဝေခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာအခြေအနေများကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အစိုးရမှစုဆောင်းသည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ရအရာရှိများခန့်ထားခြင်း၊ TCDD Taşımacılık A. “. “ နိုင်ငံတော်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန” 52 ဘွဲ့ရများအားစုဆောင်းလိမ့်မည်။ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်မှုအတွက်ခွဲတမ်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -3ဘာသာပြန်များကိုခေါ်ယူခြင်း၊ 1 ရှေ့နေများနှင့် 48 အစိုးရ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု၊ စုစုပေါင်း 52 အမြဲတမ်း ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနအတွက် KPSS 2019 /2ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများတွင်တွဲဖက်ဒီဂရီဘွဲ့ရများနှင့်အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများအားစုဆောင်းခြင်းအတွက်ခွဲတမ်းမရှိပါ။
2019 /2ရုံးသည်အထူးအခြေအနေများအတွက်လျှောက်ထားသည်
KPSS 2019 /2လမ်းညွှန်တွင်ပါ ၀ င်သောယေဘူယျလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများသည် ၀ န်ထမ်းများ၏လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များအပိုင်းနှင့်ဤလမ်းညွှန်ပါရာထူးများရှိ“ အားလုံး” လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်“ လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအထူးအခြေအနေများ” aday ဟူသောအသုံးအနှုန်းရှိပါကလျှောက်ထားသူများသည်ဤအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းများမှတောင်းဆိုသောအခြားလိုအပ်ချက်များအနက်မှသေချာစွာဖတ်ရှုရမည်။
ဤ ၀ န်ထမ်းနှင့်ပတ်သတ်သောရှင်းလင်းချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်ဤအပိုင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုနေရာချထားရင်တောင်ခန့်ထားလို့မရပါ။
KPSS 2019 /2အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးရုံးလက်ခံရရှိမှုအထွေထွေအခြေအနေများ
တူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်။ (တူရကီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအမှတ် 5901 အပိုဒ် 28 အရအပြာရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အပြာရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသူများသည်ဤလမ်းညွှန်ပါရာထူးများနှင့်ရာထူးများကိုလျှောက်ထားခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ )
18 နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးစီးရန်။ (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့မဟုတ်အနုပညာကျောင်းမှဘွဲ့ရသူများသည်အနည်းဆုံး 15 ၏အသက်အရွယ်သို့ရောက်ရှိပြီးတူရကီမြို့ပြဥပဒေပုဒ်မ 12 အရမတော်တဆမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအားဖြင့်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ မတော်တဆမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်လက်ခံရမည်။ )
လုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်သုတေသနархивရှိသည်။
“ လမ်းညွှန်တွင် Kadres alan” ကြိုက်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်၊
တူရကီပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ 53 တွင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလများကုန်လွန်သွားလျှင်ပင်၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုဆန့်ကျင်သောပြစ်မှုများ၊ သူသည်တမင်တကာကျူးလွန်သောသို့မဟုတ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အတွက်ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နှင့်အထက်ချမှတ်ခြင်းခံရလျှင်ပင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့်နှင့်ယင်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ခိုးယူမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ တင်ဒါ၌မကောင်းသောအကြံအစည်များ၊ အပြုအမူများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်းသို့မဟုတ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းများဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းမပြုရ။
"လမ်းညွှန်ချက်များတွင် alan ရာထူးနေရာများ" ကိုပိုနှစ်သက်လိုသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်၊
လျစ်လျူရှုသောပြစ်မှုများ မှလွဲ၍ ၎င်းတို့သည်ပြင်းထန်သောထောင်ချခြင်းသို့မဟုတ်6ထက်ပိုမိုသောထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များခံစားခဲ့ရလျှင်တောင်မှနိုင်ငံတော်၏လူကိုကျူးလွန်သောပြစ်မှုများသည်ရှုပ်ထွေးမှု၊ ပconflictိပက္ခ၊ အဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ မသမာမှုများ၊ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းမှအပလိမ်လည်လှည့်စားသောရာဇ ၀ တ်မှုများ၊ မှောင်ခိုတင်သွင်းခြင်း၊
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ၏ပုဒ်မ 657 ဥပဒေပုဒ်မ 48 တွင်ဖော်ပြထားသောစစ်မှုထမ်းခြင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် (တပ်မတော်မှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုမပြုလုပ်ရ၊ ရွေးချယ်ခြင်းမပြုရ။ )
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းဖြင့်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏တာ ၀ န်များကိုမထမ်းဆောင်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။ (မည်သည့်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်မည်၊ မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်မစွမ်းမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်မည်ကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှတရား ၀ င်ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့မှရရှိသောအစီရင်ခံစာများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ )
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
-Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak şartları aranmaktadır.
TCDD Taşımacılık AŞ Lise Kadrosu Eleman Alım Listesi
TCDD Taşımacılık AŞ aşağıda belirtilen kadrolar için lise mezunu, toplamda 18 eleman alımı yapılacak.
Lise Kadrolar için ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
TCDD Taşımacılık AŞ Lisans Kadrosu Eleman Alım Listesi
TCDD Taşımacılık AŞ aşağıda belirtilen kadrolar için lisans mezunu, toplamda 52 eleman alımı yapılacak.
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ AVUKAT 1
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ ရုံး 1
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ ရုံး 2
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ MÜTERCİM 2
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ MÜTERCİM 1
Lisans Kadrolar için ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
TCDD Taşımacılık AŞ Önlisans Kadrosu Eleman Alım Listesi
TCDD Taşımacılık AŞ aşağıda belirtilen kadrolar için önlisans mezunu, toplamda 62 eleman alımı yapılacak.
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ ဉီးစီး 3
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ KONDOKTÖR 2
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ ဉီးစီး 2
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ KONDOKTÖR 1
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ KONDOKTÖR 7
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ KONDOKTÖR 4
STATE ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေဒါရိုက်တာ ရုံး 10
Önlisans Kadrolar için ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Memur-Sen နှင့် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ - Sen, TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. ဝန်ဆောင်မှု ...
အရာရှိ-Sen ဂုဏ်ယူပါတယ် '' TCDD Taşımacılıkကနေသွားရောက်ကြည့်ရှု
TCDD ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းကြေညာချက်! KPSS 2019 / 1
Yedikuyular နှင်းလျှောစီးစင်တာ, ရာသီ၏ပထမ ဦး ဆုံးဆီးနှင်း